Manampy amin'ny famerenana ny fiankinan-doha | Valin'ny Fanamarinana
Home Miala amin'ny Porn Fanampiana amin'ny fiankinan-doha amin'ny Internet
Làlana mankany amin'ny fahasitranana
Ny fihoaram-pefy amin'ny sary vetaveta amin'ny Internet dia mety hampihena ny volondavenona amin'ny faritra lehibe ao amin'ny ati-doha. Manimba ny rafitra sy ny asany izany. Afaka miseho amin'ny fomba maro ny fanovana:
toy ny tsy fahatomombanana ara-pientanam-po
tsy fahampian'ny motivation
tsy fahampian'ny tombontsoa amin'ny tena mpiara-miasa
tsy misy firaisana ara-nofo
ny fanahiana ara-tsosialy
fetishes tsy mahazatra
faniriana hanasongadina rakitsary pôrnôgrafia
dysfunction erectile and in some cases
Fampitomboana ny fitaovana tsy ara-dalàna.
Manaiky ny ankamaroan'ny olona fa vokany tsy mahafinaritra, tsy ilaina ary mampidi-doza aza izany. Na izany aza, tsy tapaka ianao, misy lalana miverina amin'ny fanarenana.
Ireto misy fanasitranana tsara an-tserasera sy fanohanana an-tserasera manokana momba ny pôrnôgrafia amin'ny Internet. Izy ireo dia miorina any Etazonia na Aostralia. Ny telo voalohany dia manana vondrom-piarahamonina anaty aterineto Ireo tolotra ireo dia manampy amin'ny mpikambana hafa ao amin'ny vondrona 24-ora isanandro. Manana mpikambana maro avy ao Angletera ry zareo.
Atsaharo ny firenena
Atsaharo ny firenena manampy ny olona 'hivezivezy' ny atidohany amin'ny famporisihana sy fanabeazana. Ny fikolokoloana dia fitsaharana tanteraka amin'ny fanentanana ara-nofo (sary pôrnôgrafia). Niorina ny Amerikana mpikatroka Gabe Deem (Twitter @GabeDeem) ny Reboot Nation. Fiaraha-monina misy ireo olona nahita ny vokatra ratsy momba ny pôrnôgrafia. Raha toa ianao na ireo olon-tianao izay miady amin'ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafika sy / na ny fijerena sary vetaveta amin'ny filokana, dia ity no toerana ho anao. Amin'ity tranonkala ity dia hahita loharanom-baovao sy fampahalalam-baovao maro ianao mba hanangonanao ireo fitaovana ilaina hanombohana indray ny androany. Ho fantatrao bebe kokoa ihany koa ny mety ho voka-dratsin'ny pelaka amin'ny Internet. Manangana YouTube ihany koa ny Reboot Nation Fahitalavitra TV.
NoFap dia ny fiarahamonina samirery amin'ny teny Anglisy. Manana fanamby izy ireo amin'ny fandraisan'ireo mpandray anjara amin'ny pôrnôgrafia sy ny masturbation mba hialana amin'ny fiankinan-doha amin'ny filôzôfika sy ny fitondran-tena mahamenatra. Andro 90 no fari-bolamena. NoFap dia manohana ireo niharam-boina tamin'ny pôrnôgrafia. Na misy fiankinan-doha amin'ny pôrnôjia ianao na mila fanohanana amin'ny maha-mpiara-monina, ray aman-dreny, na olon-tiana iray izay miady amin'ny sary vetaveta, ny NoFap
eto dia manohana anao ny vondrom-piarahamonina.
Reddit NoFap dia version hafa avy amin'ny NoFap amin'ny reddit / r / forum.
Resaka hafa an-tserasera
Ny atidoha amin'ny pôrnôs dia ny tahiry lehibe indrindra manerantany momba ny siansa momba ny fiankinan-doha amin'ny Internet.
Fitiavana roa miaraka amin'ny fanampiana ny olona avy amin'ny finoana na ny mpandala ny nentin-drazana Miadia ny zava-mahadomelina vaovao any Etazonia ary Fahatokiana naverina amin'ny laoniny any Aostralia.
Toy izany koa, ny tranonkala aostralianina Mandehana amin'ny fahamendrehana manana fampahalalana tsara sy lahatsary.
Hetsika 12 mifototra amin'ny sehatra sy SMART
Sex Addicts tsy fantatra (SAA) dia manolotra vondrona mpanohana ny mpiara-belona ho an'ireo olona manana fiankinan-doha amin'ny fananahana manaraka ny fitsipika 12-dingana. Maimaimpoana ny fivoriana ary atao manerana ny UK rehetra.
Ny mpidoroka firaisana ara-nofo sy ny fitiavana tsy fantatra anarana (SLAA) dia manolotra vondrona fanohanana mpiara-miombon'antoka amin'ireo olona manana firaisana ara-nofo sy / na ny fiankinan-doha amin'ny fomba manaraka ny fitsipiky ny 12. Ny fivoriana dia maimaim-poana ary natao manerana an'i Angletera.
COSA dia programa fanarenana 12 ho an'ny lehilahy sy vehivavy izay voakasik'ireo fihetsika mamoafady mampiady saina ny fiainany. Ny fivoriana dia maimaim-poana ary natao manerana an'i Angletera.
SMART Recovery - Fiofanana momba ny fitantanana sy fanarenana tena. Ny serivisy an-tserasera amin'ny UK SMART Recovery dia misy sehatra tambajotra sosialy, tranokala fampiofanana ary rafitra fifampiresahana.
CEOP dia ny baiko momba ny fitrandrahana ankizy sy ny fiarovana an-tserasera. Mihazakazaky ny polisy, tranonkala lehibe any Angletera. Ny CEOP dia manome fanohanana raha misy zavatra nitranga tamin'ny aterineto izay nahatonga anao ho sahiran-tsaina na tsy mahomby.
The Atsaharo izao! fiantrana izay ao anatin'ny Lucy Faithfull Foundation, samy fikambanana mpanao asa soa manohitra ny ankizy, manome fanampiana ho an'ny lehilahy (vehivavy koa) izay mampiasa fitaovam-panararaotana zaza tsy ampy taona ary na manana fahatsapana firaisana amin'ny ankizy (jereo eto ambany).
Ny NSPCC miasa Childline izay asa fanompoana hanampiana ny tanora amin'ny karazana olana rehetra. Manana loharanom-baovao tsara momba ny firaisana ara-nofo amin'ny Internet sy ny sary vetaveta izy.
Ny Tetik'asa Naked Truth dia miorina ao Manchester ary manolotra fanampiana avy amin'ny fomba fijery kristianina.
Software * hifehezana ny fidirana amin'ny pôrnôgrafia
Afaka manampy amin'ny fitantanana fampiasana sary vetaveta ny sivana, saingy azo ihodivirana foana izy ireo. Hitantsika ho toy ny fanampiana mahasoa izy ireo, fa ny mpidoroka iray izay te hampiasa dia hahita fomba manodidina azy ireo. Ny ankamaroany dia midika hoe fampiasana telefaona na takelaka tsy misy sivana ataon'ny olon-kafa.
Fanekempihavanana dia manolotra ny andraikiny amin'ny aterineto sy ny sivana, mifantoka amin'ny mpisera vetaveta
hodi-kazo dia mamela ny ray aman-dreny hanara-maso ny fampiasana ny media sosialy eo amin'ny tanora
Norton Fianakaviana Premiere
Votoatin'ny Content sy Fianakaviana mpiaro an'i Integro
Fianakaviana azo antoka McAffee
* Ireto ny sasany amin'ireo safidy rindrambaiko maro azo jerena. Ny lisitra an-dry zareo eto dia tsy manome fanekena avy amin'ny The Reward Foundation. Makà fotoana hamotopotorana hoe inona ny sivana sy ny fanarahamaso ny apps dia mety amin'ny zavatra ilainao.
Ny atidohanao amin'ny pôrnô: Pornografie amin'ny Internet ary ny firoboroboan'ny fiankinan-doha nataon'i Gary Wilson, Commonwealth Publishing. Available in pirinty, ho boky ho an'ny horonam-peo ary ho toy ny e-boky momba ny hatezerana. (Azo ampiasaina ny kinova audio maimaim-poana raha misoratra anarana amin'ny Audible ianao mandritra ny iray volana fitsarana maimaim-poana.)
Wack: Nalefa tamin'ny Internet Porn nataon'i Noah B. E, Fiangonana. Azo alaina maimaim-poana amin'ny maha-PDF raha toa ka manoratra ianao Eto. Nanoratra tamin'ny zavatra niainany i Noah Church, satria mpidoroka sary vetaveta tamin'ny tenany.
The Porn Trap: Ny Tari-dàlana Manan-danja Amin'ny Fitaizana Olana Amin'ny Pôrnôgrafia nataon'i Wendy Maltz sy Larry Maltz.
Fiankinan-doha amin'ny firaisana: ny fomba fijerin'ny mpiara-miasa avy amin'i Paula Hall, teraka mpitsabo eto UK.
Doctors: Ny lehilahy ao amin'ny tranonkala fanarenana dia nilaza fa matetika ny dokotera tsy mahalala ny fiantraikan'ny fampiasana sary vetaveta. Vokatr'izany dia manolotra ny Viagra na ny toy izany izy ireo hiatrehana olana erectile. Viagra dia miasa 'ambanin'ny fehikibo' mba hanampiana ny rà mandriaka amin'ny filahiana. Ny olana dia ny tsy fetezan'ny erectile vokatry ny filokana dia olana amin'ny tsy fahampian'ny famantarana ny nerveo eo amin'ny ati-doha sy ny taovam-pananahana. Vokatr'izany dia matetika ny Viagra sy ny pilina mitovy amin'izany dia matetika no tsy miasa na mijanona tsy miasa haingana ary mamela ireo lehilahy vao maika hitebiteby kokoa. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fomba hitrangan'ny ED dia jereo ity fampahafantarana. Ity misy horonantsary 11 minitra tafatafa amin'ny urologist.
Raha toa ianao ka mpitsabo amin'ny fahasalamana izay te-hampiofana ny fiofanan'ny CPD amin'ity sehatra ity dia jereo ny sainay atrikasa. Izy ireo dia neken'ny Royal College of General Practitioners.
Any Ekoatera, fotoana fialantsasatry ny GPs any amin'ny foibe ara-pahasalamana dia manodidina ny volana 9-12. Ny toeram-pitsaboana ara-pahasalamana ara-pahasalamana dia matetika mahakasika tranga ahiahiana amin'ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafika amin'ny fitsaboana amin'ny fampiharana azy manokana Raha tsy afaka miala amin'ny pôrnôma amin'ny alàlan'ny tolotra maimaim-poana amin'ny aterineto ianao dia misy safidy hafa. Mety misy ifandraisany amin'ny olana na mila fanohanana amin'ny fialana amin'ny mpampianatra momba ny firaisana ara-nofo. Ny mpitsabo mpanentana tsara dia tokony hahalala ny aretina mifandraika amin'ny pôrnôgrafia sy ny fiankinan-dohan'ny firaisana ara-nofo. Mifandraisa amin'ny iray amin'ny fikambanana amboara ao UK:
Relationships Scotland (ho an'ny mpivady ihany).
Fikambanana britanika ho an'ny torohevitra sy fitsaboana aretin-tsaina.
Counselling & Psychotherapy any Ekosy.
Fikambanana ho an'ny fitsaboana ny fiankinan-doha amin'ny firaisana ara-nofo sy ny fandeferana.
Mety hihombo ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia. Raha nampangaina ho nanao heloka bevava ianao dia mila fanampiana matihanina. Mitadiava fanampiana avy hatrany amin'ny mpitsabo ara-pananahana voaofana. Mila mpisolovava mahay koa ianao.
Raha any Ekosy ianao dia manoro hevitra anao amin'ny fifandraisana amin'ny serivisy maimaim-poana Atsaharo izao!. Atsaharo izao ny fiantrana ny fiarovana ny zaza. Mino izy ireo fa ny lakilen'ny fisorohana ny fanararaotana ara-nofo dia ny fahafantarana ny ray aman-dreny sy ny mpikambana ao amin'ny fiarahamonina. Ampahany amin'ny Lucy Faithfull Foundation izay miasa manerana an'i Angletera.
Atsaharo ny asa amin'izao fotoana izao hanohanana ny fahatokisan-tenan'ny vahoaka amin'ny fanekena sy ny famaliana amin'ny ahiahy momba ny fanararaotana ara-nofo sy ny fanararaotana ny ankizy. Manome tolotra fanohanana ho an'ny olona manana eritreritra ara-pananahana ihany koa izy ireo. Anisan'izany ireo mety hampidi-doza ny fanitsakitsahana ara-nofo. Atsaharo izany ankehitriny Manampy ireo izay voampanga tamin'ny fandikan-dalàna ara-piraisana mifandraika amin'ny fananahana sary an-tsary na ny toy izany. Anisan'izany ireo olona nadinadinina noho ny fanalana ny aterineto. Manohana ny namana sy ny mpianakavy ihany koa izy ireo, izay mety hampidi-doza ny manao firaisana ara-nofo na tezitra.
<< Fantaro ny olan'ny pôrnôgrafia Mandeha mamoa sary vetaveta >>